Jakob Krembzow | Frontier Myanmar
Jakob Krembzow isaGerman journalist. He has worked for Myanmar Business Today and German boadcaster 89.0 RTL before joining Frontier.
မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ လှမ်းချီနေသည့် အစိုးရငွေတိုက်စာချုပ် လေလံပွဲများ
Jakob Krembzow ရေးသားသည်။
လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအခြေပြု ဖွံ့ဖြိုးမှု၌ အကျိုးလည်းရှိ၊ ဝေဖန်မှုများလည်းရှိ
သန်းချီသည့် ဘဝများစွာအတွက် အပြုသဘောဆောင် အပြောင်းအလဲကို ဆောင်ကြဉ်းမည့် ကျေးလက်နေ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးရန် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က စိုက်ထုတ်ပေးလိုက်သော အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၈၀ မှာ လုံလောက်မှုမရှိဟူသော အစီရင်ခံစာတစ်ရပ် မကြာသေးမီက ပေါ်ထွက်ခဲ့သည်။
မိမိတို့၏ ဒေသန္တရ ဗဟုသုတများမှာ လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပိုမိုများပြားသော ထောက်ပံ့ငွေ ရရှိရေးတို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် ပြောရေးဆိုခွင့် ပိုရှိစေမည့် ကြောင်းကျိုးရှင်းပြချက်ပင် ဖြစ်သည်ဟု မြန်မာအင်န်ဂျီအိုများက ပြောကြားလိုက်သည်။
အူရီဒူးသုံးစွဲသူ ရှစ်သန်းအထိ ရှိလာ
၂၀၁၆ ခုနှစ်၏ ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် သုံးဆွဲသူ ၁ ဒသမ ၃ သန်း ထပ်မံရရှိခဲ့ပြီးနောက် ဇူလိုင်လ၌ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းလုံးတွင် သုံးဆွဲသူ ရှစ်သန်းအထိ ရှိလာပြီဖြစ်သည်ဟု အူရီဒူးက သြဂုတ် ၅ ရက်နေ့က ကြေညာခဲ့သည်။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကွန်ယက်.